Kala-Baaxad Weyn 2GB OST Faylasha Faylasha PST ee Yaryar - Tilmaam Tallaabo-tallaabo ah
Bogga ugu weyn Products DataNumen Exchange Recovery Kala-Baaxad Weyn 2GB OST Faylasha Faylasha yaryar ee PST
Isticmaalka DataNumen Exchange Recovery in loo Qaybiyo 2GB Weyn OST Faylasha Faylasha yaryar ee PST
Fiiro gaar ah: Haddii aad haysatid Muuqaalka 2003 ama noocyo ka sareeya, waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho habkan si aad uga soo kabato wixii kugu weynaa OST halkii ka fayl garee. Haddii kale, fadlan isticmaal habka ku jira hagahan.
Haddii aad OST faylka waxaa abuuray Microsoft Outlook 2002 ama noocyo hoose, cabirkiisuna wuxuu gaarayaa ama ka badanayaa 2GB, waxaad la kulmi doontaa daboolay OST dhibaatada faylka mana shaqeyn karo OST wixii intaa ka badan Xaaladda noocaas ah, waad isticmaali kartaa DataNumen Exchange Recovery in loo kala qaybiyo kuwa waaweyn OST fayl u gal dhowr faylal yaryar oo PST ah oo ka yar 2GB oo la jaan qaadaya Muuqaalka 2002 iyo noocyada hoose. Markaas waxaad isticmaali kartaa Muuqaalka 2002 ama qoraallada hoose si aad u kala furto faylasha PST kala jaban mid midna aadna u hesho xogtooda dhib la'aan.
Fiiro gaar ah: Ka hor inta aan loo qaybin xajmiga weyn OST Fadlan la soco DataNumen Exchange Recovery, fadlan xir Microsoft Outlook iyo wixii kale ee codsi ah ee marin u heli kara ama wax ka beddeli kara OST gudbiso.
Tag tab, ka dibna dooro xulashada soo socota:
oo u dhig xadka cabbirka qiime ka yar 2GB. Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho qiime yar oo ah 2GB si faylkaaga PST uusan dhaqso u gaarin 2GB markale, tusaale ahaan, 1000MB. Fadlan la soco cutubku waa MB.
Ku noqo tab.
Xulo xaddiga weyn OST faylka la kala qaadayo:
Waad soo gelin kartaa ka weyn OST si toos ah magaca faylka ama guji kan badhanka si aad u caleenta u xulato OST faylka. Waxa kale oo aad riixi kartaa badhanka si aad u hesho baaxadda weyn OST faylka loo kala qaybiyo kombiyuutarka maxalliga ah.
Sida caadiga ah, goorma DataNumen Exchange Recovery baaro oo kala jabiyo isha weyn OST faylka dhowr faylal yaryar oo PST ah, faylka ugu horreeya ee PST loo kala qaybiyey waxaa loogu magacdaray xxxx_fixed.pst, kan labaadna waa xxxx_fixed_1.pst, midka saddexaadna waa xxxx_fixed_2.pst, iyo wixii la mid ah, halka ay xxxx tahay magaca isha weyn OST faylka. Tusaale ahaan, ilaha ka weyn OST Faylka Isha.ost, marka la fiiriyo, faylka ugu horeeya ee PST loo kala qaybiyey wuxuu noqon doonaa Source_fixed.pst, kan labaadna wuxuu noqon doonaa Source_fixed_1.pst, kan saddexaadna wuxuu noqon doonaa Source_fixed_2.pst, iwm.
Waxaad ku soo gelin kartaa magaca faylka wax soo saarka PST si toos ah ama waxaad riixi kartaa badhanka si aad u caleenta u xulato magaca faylka PST.
Maaddaama oo kaliya aan haysanno Muuqaalka 2002 ama noocyo ka hooseeya oo la rakibay, waa inaan u dejino qaabka faylka wax soo saarka PST "Outlook 97-2002" agteeda sanduuqa edit file. Haddii aad u dejiso qaabka "Auto Determined", markaa DataNumen Exchange Recovery waxay soo saari doontaa faylka wax soo saarka PST ee la jaan qaadaya Muuqaalka lagu rakibay kombiyuutarka maxalliga ah.
Click ah batoonka, iyo DataNumen Exchange Recovery doonaa start iskaanka isha weyn OST faylka, dib u soo kabashada iyo ururinta xogta ku jirta, ka dibna ku ridaya feyl cusub oo la kala jaray oo PST ah oo magaciisu ku qoran yahay Tallaabada 5. Waxaan tusaale ahaan u isticmaali doonnaa Source_fixed.pst
Marka cabbirka Source_fixed.pst uu gaaro xadka hore ee Tallaabada 2, DataNumen Exchange Recovery wuxuu abuuri doonaa feyl labaad oo PST ah oo la yiraahdo Source_fixed_1.pst, iskuna day inaad xogta haray galiso faylkaas.
Marka faylka labaad uu gaaro xadka hore DataNumen Exchange Recovery wuxuu abuuri doonaa fayl sadexaad oo cusub oo PST ah oo la yiraahdo Source_fixed_2.pst si loo xareeyo xogta haray, iyo wixii la mid ah
Kadib nidaamka kala qaybinta, haddii xog kasta loo guuray faylasha PST ee kala go'ay si guul leh, waxaad arki doontaa sanduuqa farriinta sidan oo kale ah:
Hadda waxaad ku furi kartaa faylasha PST kala jaban mid mid leh Microsoft Outlook 2002 ama noocyo hoose. Oo waxaad ka heli doontaa dhammaan xogta asalka weyn OST faylka wuxuu ku faafaa faylashaan PST kala jabay.
Fiiro gaar ah: Nooca demo wuxuu soo bandhigi doonaa sanduuqa farriinta soo socota si uu u muujiyo guusha hannaanka kala-baxa:
Kadib waxaad kufuri kartaa faylasha PST ee kaladuuban Microsoft Outlook 2002 ama noocyo hoose. Si kastaba ha noqotee, farriin kasta iyo lifaaq kasta oo ku jira faylasha PST ee kala qaybsan, waxyaabaha ku jira waxaa lagu beddeli doonaa macluumaadka demo ee soo socda:
Si aad u hesho waxyaabaha dhabta ah, fadlan dalbo nooca oo buuxa.
Kala-Baaxad Weyn 2GB OST Faylasha Faylasha yaryar ee PST